प्रेम छिप्पिएपछि काँडा उम्रन्छ र घोच्न थाल्छ ! - Pardeshi Khabar
Post by: आकाश शेर्पा प्रकाशीत मिति: March 1, 2018
‘मेरो विवाह भयो, तर प्रेम हुन सकेन’
१२ फागुन, काठमाडौं । एक साताअघि साहित्यकार प्रगति राईको उपन्यास ‘बिर्सिएको मृत्यु’ प्रकाशित भयो । राईका केही शुभचिन्तक पाठकहरुले आफ्नी प्रिय लेखकको समाचार प्रकाशित नभएपछि हामीलाई फोन गरेर चासो राखे । एउटा लेखकप्रति पाठकले दिएको त्यो महत्वपूर्ण सम्मान थियो । र, त्यही सम्मानलाई पछ्याउँदै हामी प्रगति राईलाई भेट्न उनको घरसम्म पुग्यौं ।
हामी पुग्दा प्रगति राई आफू अध्यक्ष रहेको मूलबाटो प्रतिष्ठानको राजधानीमा हुन लागेको कार्यक्रमको तयारीमा व्यस्त रहिछन् । आधा घण्टा कुरा गर्ने सर्तमा सुरु भएको अन्तरवार्ता ४ घण्टासम्म चल्यो । उनको ‘लेखक–मन’ बहकिँदै गयो र केही अनौठा सन्दर्भहरु बाहिर आए, जसलाई प्रगति राई आफैंले प्रकाशन गर्नुपर्ने ठहर गरेपछि हामीले त्यसका मुख्य अंश अन्तरवार्ताका रुपमा यहाँ प्रकाशित गरेका छौंः
मैले सत्य कुरा बोलेकी हुँ । चर्चाका लागि त्यो कुरा गरेको थिइनँ । राजन मुकारुङसँग मेरो विवाह भयो, तर प्रेम हुन सकेन । २५ वर्षदेखि हामी श्रीमान–श्रीमती देखिन्छौं, तर सम्बन्ध प्रेमपूर्ण छैन । उनी आफ्नो बाटो हिँडेका छन्, मैले हिँड्न दिएकी छु । म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु भने अरुलाई बाँध्नुहुँदैन । तर, मेरो एउटा भनाइ के छ भने श्रीमानसँग सम्बन्ध बिग्रियो भन्दैमा श्रीमानका परिवारसँग पनि सम्बन्ध तोड्ने जुन चलन छ, त्यसको म विरोधी हुँ ।तपाईंले मदन पुरस्कारप्राप्त आफ्ना श्रीमान् एवं चर्चित लेखक राजन मुकारुङका विषयमा जे बोल्नुभयो र त्यो जसरी प्रकाशित भयो, त्यसले ठूलै चर्चा पाएको थियो, यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?
तर पनि तपाईं राजनजीसँगै हुनुहुन्छ नि हैन ?
हामी सँगै छौं पनि, छैनौं पनि । उनी आफ्नी प्रेमीकासँग बस्छन्, तर बिहे गरेका छैनन् । मैले उनको घर सम्हालेकी छु । प्रेम गरेका हौ भने बिहे गर, प्रेमको इज्जत गर भनेर सम्झाउँछु । बरु छिमेकी भएर बसे पनि हुन्छ भन्छु । मानेका छैनन् ।
मैले उनलाई स्वतन्त्र हुन दिएको मात्र हो । म त उनका दुई छोराकी आमा हुँ । परिवारभित्र मेरा आफ्ना दायित्व छन् । मैले त्यो निभाएकी छु । खासमा यो २५ वर्षमा हामी ५ वर्षजति मात्रै सँगै बस्यौं ।
यत्रो वर्षपछि यो कुरा बाहिर किन आयो ?
राजन मुकारुङसँग मेरो विवाह भयो, तर प्रेम हुन सकेन । २५ वर्षदेखि हामी श्रीमान्–श्रीमती देखिन्छौं, तर सम्बन्ध प्रेमपूर्ण छैन । हामी सँगै छौं पनि, छैनौं पनि । उनी आफ्नी प्रेमीकासँग बस्छन्, मैले उनको घर सम्हालेकी छु
राजनले नै फेसबुकमा आफ्नी १५ औं प्रेमीका सार्वजनिक गरेपछि त्यसको काउन्टरमा मैले आफ्ना कुरा लेखेकी हुँ । मैले उनलाई स्वतन्त्र हुन दिएँ, त्यहाँसम्म ठीक थियो । १४ जना प्रेमिका बनाउञ्जेलसम्म मैले सार्वजनिकरुपमा केही बोलिनँ । किनभने उनलाई प्रेम गर्नु र चुरोट पिउनु उस्तै लाग्छ क्यारे !
श्रीमती हुनुको दायित्वले मैले घरमा, एक्लै हुँदा निकै सम्झाएँ । १४ औं सिगरेट पनि फ्याँकेर जब १५ औं सिगरेट च्यापे, मलाई खल्लो लाग्यो । अझ सानका साथ अझ बढाइ–चढाइ प्रस्तुत गरेपछि लाग्यो, अब बोल्नुपर्छ । चाहे ती प्रशिद्ध भैसकेका लेखक राजन मुकारुङ नै किन नहून् ।
तपाईंले सम्झाउँदा उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो ?
धेरै महिलासँग सम्बन्ध राख्नु सायद पुरुषहरु सानको काम ठान्छन् क्यारे ! पुरुष अहंकार ! पिता–पूर्खाको विरासतले पनि काम गरेको होला । किनभने उनका जिजुवुवाका ९ श्रीमती थिए रे । हजुरबुवाले दुईटी विवाह गर्नुभएको थियो । तर, अरु पनि धेरै महिलासँग सम्बन्ध भएको कुरा घरमा सानका साथ कुरा हुन्थ्यो ।
उनका बुवाले पनि गर्भमै छँदा अर्की विवाह गरेर हिँड्नु भएको थियो रे । हाम्रो समाजमा त्योबेला यस्तो काम गर्नुलाई गौरव मानिन्थ्यो । अहिले बहुुविवाह गर्न पाइँदैन । तर, प्रेमका नाममा सँगै बस्न पाइन्छ ! सायद यही काम गरेका होलान् ।
अनि तपाईं पनि प्रेम गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ ? कि महिलाले चाहिँ सहेरै बस्नुपर्छ भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
मलाई थाहा छ, प्रेम एक्लै आउँदैन । प्रेमको सिंगो प्याकेटभित्र केवल प्रेम मात्रै हुँदैन । प्रेमसँगै अधिनायकवाद आउँछ । प्रेमसँगै दायित्व, घुर्की, दासता, अनिच्छित यौन र आर्थिक समस्याहरु पनि आउँछन् । कविको कल्पनाजस्तो वा कुनै अदर्श सिद्धान्तजस्तो मुलायम र कल्काउँदो मुना भएर प्रेम बसिरहँदैन । छिप्पिदै गएपछि यसमा काँडा उम्रन थाल्छ र घोच्न थाल्छ ।
भनेपछि तपाईंको विचारमा प्रेमको कुनै अर्थ छैन ?
अर्थ छैन भनिहाल्दिनँ । अरुका लागि अर्थ होला । मेरो जीवनमा त्यो भएन ।
कुनै एक क्षण पनि ?
सायद । यसको अर्थ, म रुख्खा–सुख्खा महिला होइन । हेर्नुस्, यी कुरा गर्दा मेरा आँखा भिजिरहेका छन् ।
तपाईं आफ्नो बच्चा बेलाको के कुरा सम्झनुहुन्छ ?
म दुई दाजु र दुई दिदीपछिकी सन्तान हुँ । मपछि एउटी बहिनी पनि जन्मिइन् । मेरा बुवा हास्यरसले भरिपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । आमा भने तार्किक कुरा गर्न मन पराउनुहुन्थ्यो । मलाई लाग्छ, बुवाको हास्यरस र आमाको तार्किकताले मेरो आजको लेखक व्यक्तित्व जन्मिएको हो । मलाई माइतीमा निकै स्वतन्त्रता थियो । एकप्रकारले लाड–प्यारले हुर्किएकी हुँ । ८ वर्षको उमेरमा मात्र मलाई स्कुल भर्ना गरियो । तर, म घरमै लेखपढ गर्न जान्ने भैसकेकी थिएँ ।
तपाईंको ‘वादी विज्ञप्ति’ कविता सङ्ग्रह पढ्दा निकै विद्रोही कवि लाग्छ । ‘लेखककी स्वास्नी’ उपन्यासमा महिलाको पीडा र त्यसबाट पाउने मुक्तिका विषयमा लेख्नुभएको छ । दुवै पुस्तकमा पाइने त्यो विद्रोह तपाईंको जीवनमा पनि छ कि लेखनमा मात्रै हो ?
धेरै लेखकहरु यसो हेर्छु र मनन गर्छु, उनीहरु एकथोक बाँच्छन् र अर्को थोक लेख्छन् । सायद मसँग त्यस्तो व्यक्तित्व छैन । मलाई याद छ, स्कुलमा मलाई एक कक्षामा भर्ना गरियो, तर म ठूली भैसकेकीले माथिल्लो कक्षामा पढ्न चाहन्थेँ ।
सरले एकैपल्ट माथि चढाउन मिल्दैन भनेर हप्काउनुभयो र आमा–बुवालाई सम्झाउनुभयो । मैले नियम नै यस्तै होला भन्ने ठानेँ र चुपचाप पढेँ । एक कक्षामा पढ्नुपर्ने कुरा केही थिएन, त्यसैले धेरै दिन स्कुल नगए पनि प्रथम भएँ ।
दोस्रो वर्ष हेडसरले आफ्नो भजितलाई एक कक्षा पनि नपढाइकन तीनमा भर्ना गरिदिनुभयो । मैले विद्रोह गरेँ । त्योबेलासम्म मैले विद्रोह गरेँ, जबसम्म मलाई पनि तीन कक्षामा भर्ना गरिएन । त्यसपछि के थियो र ? तीनबाट अर्को वर्ष ५ मा प्रवेश पाउन जिद्दी गरेँ । त्यसपछि अर्को वर्ष ७ पढेँ । म कक्षा फड्कँदा पनि प्रथम नै हुन्थेँ । र, विद्यालयमा हुने कविता–निबन्ध प्रतियोगिताहरुमा पनि प्रथम हुन्थेँ ।
आठ कक्षापछि नि ?
म खोटाङ्को एउटा दुर्गम गाउँकी छोरी हुँ । गाउँमा ७ सम्मको मात्र स्कुल थियो । त्यो पास भएपछि म एकैपटक ९ कक्षामा नाम लेखाउन चाहन्थेँ । तर, पासआउट भएर नयाँ विद्यालय जाँदा गाउँमा जस्तो माथिल्लो कक्षामा राख्न मान्नुभएन । गाउँकै हेडसरले नै पत्र लेखेर त्यसो नगर्न अनुरोध गर्नुभएको भन्ने कुरा गर्नुभयो । मलाई निकै चित्त दुख्यो । त्यसपछि स्कुल नै जान छाडिदिएँ ।
पढाइ नै छाडिदिनुभयो ?
हो । तर, मेरो जीवनमा अर्कै कथा लेखिँदैछ भन्ने कुरा मलाई नै थाहा भएन ।
मेरी एउटी साथी थिई दीपकला । उहाँकी फुपू भोजपुरको दिल्पामा हुनुहुन्थ्यो । उसले एक दिन आफ्नी फुपूको घर जान आग्रह गरी । मैले मानिनँ । उसले खोटाङ र भोजपुरको सीमानामा रहेको डाँडोसम्म जाउँ, त्यहाँबाट साह्रै राम्रो दृश्य देखिन्छ भनेर फकाई । हामी घरबाट हिँड्यौं । त्यहाँ पुगेपछि उसले फुपूको घर पनि पुगिहालौं न त भनेर आग्रह गरी । घर फर्कने अवस्था थिएन । म उसको पछि लागेर दिल्पा पुगेँ ।
त्यसपछि त्यहाँ यस्तो अनौठो चक्रब्यूहमा फसेँ कि थाहै नपाई मेरो विवाह पो भएछ ।
खासमा दीपकलाले मेरा बारेमा आफ्नी फुपूलाई निकै कुरा गरेकी रहिछ । उनका कान्छा छोरा राजन मुकारुङ अलि अल्लारे टाइपको केटो भएकाले उसको विवाह यही केटीसँग गर्ने हो भने उसले सुधार्छे भन्ने उहाँको धारणा रहेछ ।
उहाँले रातभरि मलाई यतै बसेर पढ, तिमीलाई कुनै समस्या हुँदैन भनेर सम्झाउन थाल्नुभयो । म जसरी पनि ९ कक्षामा पढ्न चाहन्थें र १६ वर्षमै एसएलसी पास गर्न चाहन्थेँ । यो सुविधा उहाँले जुटाइदिने कुरा गर्नुभयो । मलाई लाग्यो, उहाँले मेरो चिन्ता गर्नुभएको हो ।
तर, दुई दिनमै मैले राजनसँग बस्नुपर्ने भयो । किनभने, यता घरमा म राजनसँग भागेको कुरा चलेछ । फर्कने अवस्था भएन । यसरी म सस्ती बेहुली भएर राजनको कोठामा सजिएँ ।
विवाह भए पनि पढाइ अघि बढाउन समस्या त भएन होला नि ?
नौ कक्षामा नाम लेखाएर पढ्न थालें । कविता प्रतियोगिताहरुमा प्रथम आउँथे । मेरो प्रगति देखेर सबै खुसी थिए । तर, हामी दुबै १५–१६ वर्षे अल्लारे थियौं । विवाहपछि कसरी सुरक्षित यौनसम्पर्क राख्ने भन्ने थाहा थिएन । हुन त सासू आमा गाउँकी स्वास्थ्य परिचारिका हुनुहुन्थ्यो । तर, उहाँले सुरक्षित कसरी रहने भनेर सिकाउनुभएन । परीक्षा दिने बेलामा म गर्भवती भएँछु । अचानक पढाइ छाड्नुपर्‍यो ।
अनि अर्को वर्ष ?
हामी साथीजस्ता मात्रै थियौं । एउटा छोरा जन्मिएपछि किन एउटा मात्रै, भोलिको के भरोसा ? दुईटा बनाउनुपर्‍यो भन्ने मेरो मनमा आयो । त्यसपछि अर्को बच्चा भैहाल्यो । jlचरा राजनलाई पनि थाहा भएन होला ।
यसरी पढ्न भनेर भोजपुर पुगेकी केटी १८ वर्षकी हुँदा दुई छोराकी आमा पो भएँ ! खासमा विवाह के हो, त्यो पनि राम्रो थाहा भएन । लोग्ने–स्वास्नीबीचको प्रेम के हो, त्यो पनि थाहा भएन ।
आज तपाईं र राजनजी दुवै प्रशिद्ध लेखक हुनुहुन्छ । नपढी तपाईंहरु यो स्थानमा पुग्न कसरी सम्भव भयो त ? यसलाई प्रगति किन नमान्ने ?
म पो महिला थिएँ र मेरा सन्तानका कारण मेरो पढाइ रोकियो । राजन त एसएलसी पास गरेर काठमाडौं आइहाले । उनी पनि पहिलेदेखि लेख्थे । तर, काठमाडौं आएपछि उनको लेखन सायद बढ्दै गयो । एक दिन मेरी आमाले खोटाङबाट के खबर पठाउनुभयो भने, ‘तैंले पढाइ छाडेर छोराहरु हुर्काइरहेकी छेस् । तेरो श्रीमान् पढेर विद्वान हुँदैछ । तैंले यसरी पढाइ रोकिस् भने भोलि तेरो र श्रीमानको स्तर मिल्दैन । उसले अर्को विवाह गर्छ । तँ न यताको हुन्छेस्, न उताको हुन्छेस् । बरु छोराहरु लिएर माइत आइज, म तेरा छोराहरु हुर्काउँछु ।’
यो कुराले मेरो मन छोयो । म घर छाडेर माइती आएर पढ्न थालेँ ।
एक वर्ष पनि माइतीमा टिक्न सकिनँ । स्कुलमा जाँदा आफूभन्दा जुनियरसँग पढ्नु पर्दथ्यो । उनीहरु मलाई जिस्क्याउँथे । त्यहाँसम्म ठिकै थियो, तर शिक्षकहरु नै मुटु दुख्नेगरी भन्थे, ‘पढ्नेबेलामा पोइला गई, अहिले पढाएको कुरा बुझ्दिन भन्छे ।’
खासमा तीन–चार वर्ष पढाइ छाडेपछि र छोराहरु हुर्काउनु पर्ने दायित्वले सबै कुरा बिर्सिसकेकी रहेंछु । सर र मेरा सहपाठीहरु मेरो यही पक्षलाई नमीठो गरी उडाउँथे । अन्त्यमा केही लागेन र भोजपुर नै फर्किएँ । बरु सासूको सहयोगले पछि एसएलसी पास गरेँ ।
त्यहीँदेखि राजनजीसँग छुट्टै बस्न थाल्नु भएको हो ?
होइन । छोराहरुलाई घरमा छाडेर म पनि कलेज पढ्न काठमाडौं आएँ । काठमाडौंमा संगै बसियो । तर, राजन अलि अल्लारे टाइपको मान्छे, त्यसमािथ तत्कालीन सरकार विरोधी र माओवादी पक्षधर । उसको आस्था थाहा पाएपछि मानिसहरु उसलाई काम दिन डराउँथे । मैले शिक्षण पेशा गरेर छोराहरु पालेँ । उनी कविता लेख्ने र साहित्यिक आन्दोलनमा लागे । यसरी फरक शैलीले हाम्रो आ–आफ्नो जिन्दगी अघि बढ्न थाल्यो ।
हामीमा प्रेम थिएन, त्यसैले छोराहरु काठमाडौं नल्याई म बस्न सकिनँ । उनी खासै कामकाजी नभए पनि घर र छोराहरुको दायित्व नलिने । सबै मैले नै हेर्नुपर्ने भएकाले मैले स्कुलको जिम्मेवारी राम्रोसँग लिन सक्दिनँ थिएँ । कहिले छोराहरु कता गइरहेको, कहिले घाइते भएको खबर सुन्नु पर्दथ्यो । यसले गर्दा पनि सायद हामीसँगै भएर पनि सँगै नभएजस्तै थियौं ।
तपाईं कुनबेला लेख्नुहुन्थ्यो त ?
घरमा लेख्ने वातावरण नै थिएन । स्कुलमै हुँदा लेख्थेँ । जागिर खाँदै ‘वादी विज्ञप्ति’ का कविताहरु लेखेकी हुँ र संग्रह पनि निकालेकी हुँ । कविता लेखेका कारण मैले विद्यालयमा धेरै गाली पनि खाएकी छु । बोर्डिङ् स्कुलमा अंग्रेजी लेख्ने बोल्नेलाई महत्व दिइन्थ्यो, नेपाली कविता लेख्नेको इज्जत हुने कुरै भएन । तै पनि लेख्न छाडिनँ ।
तपाईं त विदेश पनि जानु भएको थियो क्यारे, कसरी पुग्नुभयो ?
कोरिया गएकी थिएँ । करिब साढे चार वर्ष बसेँ । पैसा कमाउने बाध्यता पनि थियो । कोरियन भाषाको शिक्षक भएर काम गर्दागर्दै उता जान मन लाग्यो र गएँ । ‘लेखककी स्वास्नी’ उपन्यास मैले कोरिया बसेरै लेखेकी हुँ ।
तीन महिनासम्म जागिर छाडेर कोरियामा साथी–भाइको भात पकाउँदै किताब लेखेकी हुँ । पैसा कमाउन आएकी मान्छे, जागिर छाडेर लेखेको देख्दा मलाई त्यहाँ पागल पनि भने । सायद उहाँहरुको नजरमा त्यो पागलपन नै थियो । तर, मभित्र जुन आगो सल्किएको थियो, त्यो नलेखी पूरा हुँदैनथ्यो । लेखेर मैले राजनलाई पठाइदिएँ । उनले केही सम्पादन गरेर छापिदिए ।
तपाईंको लेखनमा राजनजीको के कति योगदान छ ?
खासै योगदान छैन भन्दा अन्याय हुँदैन होला । यसको अर्थ, उनले असहयोग गर्थे भन्ने होइन । उनले मेरो लेखनको विषयवस्तु रुचाउँथे, रुचाउँछन् । लेखनको हकमा हामी एकअर्काका शुभचिन्तक हौं ।
अनि तपाईंले नि ? उहाँलाई कति योगदान गर्नुभयो लेखनमा ?
म पनि उनलाई लेख्ने वातावरण बनोस् भन्ने चाहन्थेँ । उनी लेखक भएकैले अल्लारे भएर हिँडेका हुन् भन्ने महसुस गर्थे । त्यही भएर पनि स्वतन्त्र छाडेको हुँ । म कोरिया गएपछि तिमी केही काम नगरी लेख, चाहिएको पैसा म पठाइदिन्छु भन्थेँ । नभन्दै म विदेशीएकै बेला उनले ‘दमिनी भीर’ लेखे र त्यसले मदन पुरस्कार पनि पायो । यसअघि उनको ‘हेत्छाकुप्का’ उपन्यास प्रकाशित भएको थियो ।
श्रीमान् राजन मुकारुङको धेरै आलोचना भयो । लेखक राजन मुकारुङको पनि आलोचना गर्नुहुन्छ कि प्रशंसा ?
प्रसंसा गर्छु । लेखक राजन मुकारुङ साह्रै सुन्दर लेख्छन् । मैले चिनेदेखि नै उनले किरातका लुकेका कुरा बाहिर ल्याउने, त्यसमा बहस गर्ने उनी एक्ला व्यक्ति हुन् । पछि उपेन्द्र सुब्बाहरु थपिए । खासमा सिर्जनशील अराजकताले मूलधारको भनिएको खस आर्य र पछाडि पारिएका जात–जातिका भाषा साहित्यका बीचमा पुलको काम गर्ने, ती विषयमा बहस गराउने काम गरेको छ । उनी र उनका साथीभाइहरु लगातार यो काममा लागिरहेका छन् ।
अनि तपाईं नि ?
म पनि लगातार मेरो लक्षका लागि काम गरिरहेकी छु । तर, मेरा विषय अलि फरक छन् । म महिला र उनीहरुले भोगेका पीडाहरुका विषयमा काम गर्न चाहन्छु । मेरो एउटा सपना छ, महिलाहरुले नै वंशको अधिकार पाउनुपर्छ । वंश अधिकार नपाएकै कारण समाजले पुरुषलाई महत्व दिएको हो ।
जुन दिन महिलाले आफ्नो जन्मथर आफ्ना सन्तानलाई दिन थाल्छन्, त्यही दिनदेखि महिलाहरुका समस्या समाधान हुन थाल्छ ।
अलि बुझिएन, अझै स्पष्ट पारिदिनु हुन्छ कि ?
महिलाको वंशअधिकार भन्नेवित्तिकै पुरुष प्रधान समाज डराउँछ । वंशअधिकार भन्नाले कुनै पुरुषले बिहे गर्ने बित्तिकै उसले महिलाको घर जानुपर्छ भन्न खोजेको होइन । केवल महिलाले जन्माएको सन्तानलाई उसले चाहेको थर प्राप्त गर्ने अधिकार भन्न खोजेको । मानौं, उसलाई श्रीमानको थर दिन मन लागेन भने उसले आफ्ना सन्तानलाई माइतीको थर राख्न पाउने अधिकार ।
यसो हुनेवित्तिकै छोरीको हात माथि हुन्छ । माइतीहरु गौरवान्वित हुन्छन् । उसको मानमनितो नै अर्कै हुन्छ । आज समाज किन पुरुष प्रधान छ ? किनभने पुरुषको थर नै उसका सन्तानको थर हुन्छ । मेरो माग यति मात्रै हो, महिलाले आफ्ना सन्तानलाई माइतीको थर दिने कि घरको थर दिने भन्ने अधिकार महिलालाई हुनुपर्याे ।
म यो सपना पूरा गर्न रातदिन लागिरहेकी छु । लडाईं लडिरहेकी छु । मेरो मृत्युअघि यो सपना पूरा हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
यसका लागि ठूलो लडाईं लड्नुपर्छ होला । तपाईंका हतियार के के हुन् ?
मुख्य कुरा त लेखन नै हो । मेरा कवितामा तपाईं यी कुरा पाउनु हुन्छ । ‘लेखककी स्वास्नी’मा समस्या देखाएकी छु । आउँदो पुस्तक ‘थाङ्ग्रा’ मा यो अझ स्पष्ट भएर आउनेछ । जसमार्फत मैले आफ्ना मुद्दा अघि बढाइरहेकी छु ।
यो लडाईं लड्ने अर्को हतियार भनेको म अध्यक्ष रहेको मूलबाटो प्रतिष्ठान हो । यो संस्थामार्फत म आफ्ना मुद्दा सरकार र समग्र महिलासमक्ष पुर्याउँछु । पुरुषहरुको नैतिक समर्थन लिन्छु । महिलाको वंश अधिकारको रक्षा गर्नुको अर्थ पुरुषलाई अन्याय गर्नु होइन, केवल आमाको हक स्थापित गर्नु मात्रै हो भन्ने कुरा बुझाउँछु ।
अहिले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश मनाइरहेको छ । उसलाई महिला दिवस कसरी सार्थक हुन्छ भनेर बुझाउने प्रयास गर्छु । यसका लागि संसारभरका नेपाली महिलाको साथ र सहयोग प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वास छ । अमेरिकाबाट दीपा राई पुन र कोरियाबाट केही महिला दिदी–बहिनीहरुले आर्थिक सहयोग गर्न थाल्नुभएको छ । बाँच्न त जसरी पनि बाँचिन्छ, तर यो अवधिमा मानिसले के गर्छ, कसका लागि बाँच्छ, आफ्ना लागि मात्रै कि अरुका लागि पनि ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । मैले जीवनमा जे भोगेँ, अबका छोरीचेलीले त्यो भोग्नु नपरोस् । यही मूल मन्त्र नै मेरा हतियार हुन् ।
अन्तर्वार्ता, ताजा खबर, नेपाली खबर, फोटो ग्यालरी, साहित्य बाटिका No Comments »
« अनिद्राको पिरलो (Previous News)
(Next News) डेटमा बोलाएर युवतीले गरिन् युवाको ‘रामधुलाई »